अविष्मरणीय सपना- सुमन लेप्चा (वाङ्चु) - Damak No.1 Online Patrika
सुमन लेप्चा वाङ्चु
सडक शान्त छ, कोही मान्छे हिडेको स्पष्टै सुनिन्थ्यो । आज नेपाल बन्द भएको हप्ता दिन बित्नै लाग्यो । तर बाटोमा अझै सवारी साधन चल्ने, बजार खुल्ला गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । साँच्चै नै शान्त छ सडक र शहर ।
कथाकार – (सुमन लेप्चा वाङ्चु) बुद्धशान्ति – ७ सुनमाई झापा
मिडिया र हरेक दैनिक पत्रिकामा पनि मधेस र पहाडको चित्कारकै चर्चा र परिचर्चा छ । राष्ट्रको संविधानसभाको चुनावको चर्चा एकातिर छ भने अर्कातिर एस.एल.सी. परीक्षाको दुर्गति । जे होस् शान्त छ नेपाल । किताव भुईतिर फ्याकदै खाटमा बस्यो सुजन । मनमा अनेक कुराहरु खेलाई रहेको छ । पढ्न खोज्यो राष्ट्रको वातावरण नै अनुकुल छैन । पढेर पनि के फाइदा र ? परीक्षा पनि त संविधानसभाको चुनाव झैं स¥यो भने । यस्तै अनेक तर्कहरु मनमा खेलाई रहेको छ । खै के भएर हो आज सुजनको सदाको झैं पढ्नमा उति चासो नै ग¥या छैन । एस.एल.सी. परीक्षा नजिकै आउन लाग्दै छ ।
‘भाइ’ को हो ? मैले तपाईलाई चिनिन ? के थियो ? कसलाई भेट्नु थियो ?
भाइ म को हुँ ? तिमीलाई थाहा छ तर चिन्नु हुदैन । अहिलेको यहाँको स्थिति नै यस्तै छ । तपाईलाई नै भेट्न आएको हुँ । म नेपाल आमाको राजदुत हुँ । मलाई उहाँले तपाईहरु जस्तै नवपिढिंसित छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुको लागि पठाउनु भएको हो । सुजन चकित बन्न पुग्यो ।
मन्त्रमुग्ध भएर कुरा सुनिरहेको छ, स्वस्थानी व्रतको कथा सुनेझैं । नेपाल आमाले पठाएको राजदुत गहभरी आँसु बनाउँदै नेपाल आमाको दैनिक दिनचर्याहरुको वर्षा गराउन थाल्यो । भाइ, के गर्नु यो अभियानको रुपमा राष्ट्रभरी व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न हिड्या हुँ । अहिले त नेपाल आमा विदेशी भूमिमा विदेशी खलनायकहरुको तरुनी बनेर बस्न विवश छिन् । नेपाल आउने ज्यादै कुरा गर्नु हुन्छ तर याँ नेपाल आमाले चैनको श्वास नै फेर्न पाएकी छैनन् । आफ्नो सन्तति मधेश बलिउड, दलहरु हलिउडमा, पहाड च्याबु्रङ्ग र सकेलाको संगितमा नृत्य गर्न चहान्छन् । आफुले नै जन्म दिएको छोराहरु अंशबण्डा गर्नुमा मिल्दैनन् । यो पीरले उहाँ ज्यादै दुःखी हुनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु हुँदै थियो–यसरी नै हो भने विदेशी तन्नेरीहरुले उतै जवर्जस्त उहाँको सिउँदो रङ्गाउँछन् रे । मलाई यहाँबाट लैजानु भनेर सधै भेट्न जाँदा भन्नु हुन्छ । के गर्नु ल्याउन त मन लाग्छ तर राष्ट्रको राजनीतिक परिवेश नै प्रतिकुल छ । उहाँ यहाँ आएपनि बुुद्ध भगवान्को जन्म दिने वृद्धआमा नै नभनी कुटपिट गर्नेछन् ।
विगतमा पनि सातवटा गोरुको साढेँ जुधाई थियो । कठोर संघर्ष गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएर बसेकी नेपाल आमाले धेरै आशा गरेकी थिइन् । अब त सगरमाथा, खहरे खोला, नदीनाला, वनजंगल, प्राकृतिक सम्पदा, परम्परा र संस्कृतिसित मञ्जाले रोदी नाच्न पाउँछु तर यहाँ त के के भयो के के । कहिले पनि शान्तिले नेपालआमा बस्न पाइरहनु भएको छैन । वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्म राम्ररी आराम गर्न सम्म पाउनु भएको छैन । नेपालआमाको छोराहरु त छन् । ती छोराहरुले कहिले पनि नेपाल आमालाई बुझ्न सकेनन् । खाली दुःखमात्रै दिन्छन् ती छोराहरुले । कहिले जेठा छोरा बम्किन्छ, कहिले कान्छा ? प्रष्ट रुपमा के कुरामा बम्किएको हो । त्यो कुरा चाहिँ कति सोध्दा पनि नेपाल आमालाई भन्दैनन् । खुलस्त कुन पहिरन मन पर्छ, त्यो कुरा भने त नेपाल आमाले आफ्नो प्रेमको चिनो तिलहरी बेचेर भए पनि किनिदिनु हुन्थ्यो नि तर के गर्नु भाइ………….।
एकदम सुनसान बन्यो । राजदुत उधोमुन्टो परेर भुईतिर हेर्न लाग्यो । सुजन भने अनेक कुराहरु मनमा खेलाउन पुग्यो । किन मलाई यी सब कुराहरु भनी रहेको छ । म के गर्न सक्छु र ? नेपाल आमाको विद्वान छोराहरुले केही गर्न सक्या छैन । यहाँ उत्पादित समस्याप्रति…..। अचम्म चकित बन्दै सुजन बोल्न लाग्यो । दाजु, तपाईंले यी सब कुराहरु त सुनाउनु भो, यो सुनेर मेरो हृदय दुःखले पाकेको छ । तर म के नै गर्न सक्छु तपाईलाई ? सुजनको प्रश्न सुनेर राजदुत अलिक मलिन स्वरमा बोल्न लाग्यो । भाइ, नेपाल आमाको सुन्दर शान्त भविष्य निर्माण गर्नुमा तपाईहरुको हात छ । मलाई लाग्छ, मैले यो अभियान विगतदेखि गरेको भए, सायद अहिले यी समस्याहरु उत्पन्न हुन्न थियो होला तर त्यो बेला दिमागमा नै यी कुराहरु घुसेन । सायद यसरी नै विगतमा गरेको भए, नेपाल आमाका छोराहरुले आज यसरी आफ्नो लाज छोप्नका खातिर नेपाल आमालाई यति विग्न चोट दिँदैनथे होला । सबै छोराहरु मोरा मात्रै जन्मिए, सबै आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न मात्रै चाहन्छन् । त्यसैले भाइ ढिलो भए पनि म यो अभियानमा देशभरि हिड्दैछु । भाइ ! तपाईले केही गर्नु पर्दैन ? यति मात्रै हो, नेपाल आमाको पक्षमा एक/दुई शब्द मुखद्वारा ओकलि दिए पुग्छ ।
संकोचित मान्दै बालकीपनमा सुजन बोल्यो– दाजु, म के नै बोल्नु र ! विद्वानहरुको कुराको सुनुवाई त हुँदैन यहाँ । फेरी मेरो एस.एल.सी.को परीक्षा हुन लाग्दैछ । म कसरी तपाईंलाई सहयोग गरुँ ? मेरो पनि त परीक्षाको तयारी गर्नु पर्छ । सुजनको कुरा सुनेर मुसुक्क मुस्कुराउँदै बोल्यो– भाइ तपाईले अहिले प्रस्तुत गरेको विचारले नै नेपाल आमा दुःखको भुमरीमा डुबेकी हुन् । मैले यहाँ तपाईलाई एस.एल.सी. परीक्षा नदेऊ भनेको हो त ? तपाईं एस.एल.सी. परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु भनेर तपाईलाई यी सब कुरा भन्या होइन । तपाईले बोर्डमा नै धक्का मच्चाउनु होस् । त्यसमा नेपाल आमाको शुभकामना छ । यति मात्रै हो । भविष्य तपाईंहरु जस्तै विद्यार्थीहरुको हो । आज तपाईहरु विद्यार्थी, भोलीका कर्णधार । तपाईहरुको कुरा अहिले नसुनिए पनि भोलि अवश्य सुन्नेछन् । त्योबेला मात्रै हालमा मसँग भएको भेटवार्तालाई सम्झिदैँ नेपाल आमाको दैनिकी दिनचर्यालाई कल्पेरमात्र एक÷एक शब्द बोलिदिनु भन्या हो ।
फेरी भाइ, अहिले तपाईले एस.एल.सी.परीक्षा दिन लाग्नु हुँदैन । कहिल्यै रातमा राम्ररी पढ्नु भएको छ ? यहाँ प्र्रत्येक दिनमा १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । त्यति मात्रै होइन शैक्षिक क्षेत्रदेखि ल्याएर आम रुपमा नेपाल बन्द । कसरी दिन सक्छौं एस.एल.सी. , एस.एल.सी.को परीक्षा दिनुमा आफु, परिवार, समाज र राष्ट्रमा अनुकुल वातावरणको सिर्जना गरिएको हुनुपर्छ । अनि मात्रै चीनको पर्खालमा अंकित एस.एल.सी. परीक्षालाई नाघ्न सकिन्छ । तपाईले हालमा तपाईमा भएको यी असरहरु सम्झेरपनि भविष्यमा बोली दिए पुग्छ । भविष्य तपाईहरुको हो, नवपिढीहरुको हो , भाइ, धेरै कुरा नगरुँ अरु नवपिढी समक्ष पनि यस्तै छलफल गर्नु पर्छ ।
यति भनि नसक्दा राजदुत सुजनकै अगाडी विलय हुन्छन् । सुजन आत्तिएर कहालिन पुग्छ ‘दाजु’ प्रतिउत्तरमा आमा बोल्नु हुन्छ । सुजन ! ए सुजन ! के भयो तलाई ? अब पो सुजन झस्याङ्ग झस्किन्छ । त्यो त सब सुजनले सपना पो देखेको रैछ । अनि मुस्कुराउँदै मनमनै भन्छ । यो कस्तो सपना देख्न पुगेछु । साँच्चै भोलि हाम्रै हो त ? के साँच्चै हामीले नै नेपाल आमाको सुन्दर शान्त भविष्यको निर्माण गर्नु पर्ने हो ……..? अस्तु !